Esilawulayo syndrome: Izimpawu kanye Ukwelashwa. Kuyini esilawulayo-kuphoqeleke syndrome?
Kuze kube manje, izindawo ezintathu abadala yikhulu ezimbili kuzo izingane anamakhulu mahlanu uxilongwe syndrome wesiyaluyalu esilawulayo-abayimilutha. Lokhu isifo, okudinga ukwelashwa saziso. Ukuze uthole izimpawu ACS, kudala nesenzakalo nokwelashwa ongakhetha.
Esilawulayo-kuphoqeleke syndrome (noma sokuphazamiseka kwengqondo) - njalo ukuphinda imicabango esilawulayo efanayo futhi okungalindelekile (noma) yezenzo (nanokuba umuntu enze imicikilisho). Lesi simo sibizwa ngokuthi esilawulayo-kuphoqeleke sifo.
Igama lesi sifo babevela amagama amabili Latin:
kukhathazeka, ngokwezwi nezwi elisho ukuthi ukuvinjezelwa, ukuvimba, kanye intela;
kokucindezelwa - impoqo, ingcindezi, self-umkhawulo.
Odokotela futhi ososayensi baye baba nesithakazelo lesi sifo of disorder esilawulayo-kuphoqeleke ekhulwini XVII:
E. Barton echazwe ukwesaba esilawulayo yokufa 1621.
Philippe Pinel olwenziwa ucwaningo emkhakheni obsessions ngo-1829.
Ivan Balinskii owethulwa kwencazelo "imicabango awayiphazamisi" ezincwadini Russian ku wezifo zengqondo, nokunye.
Ngokusho ucwaningo lwamuva, esilawulayo sifo kwachazwa ngokuthi neurosis, ukuthi akusona isifo ngomqondo izwi kweqiniso.
Esilawulayo-kuphoqeleke syndrome kungenziwa emelelwa schematically njengoba ukulandelana elandelayo kwenzeka: obsessions (imicabango awayiphazamisi) - ukucindezeleka kwengqondo (nokukhathazeka, ukwesaba) - nezifiso (nezifiso) - impumuzo yesikhashana, abese lonke futhi.
Kuye ngezimpawu ohambisana ka esilawulayo syndrome ngezinhlobo eziningi:
Esilawulayo-phobic syndrome. Libhekene khona kuphela imicabango esilawulayo noma ukukhathazeka, ukwesaba, ukungabaza ukuthi akuvezi esinye isinyathelo. Ngokwesibonelo, rethinking njalo izimo esikhathini esidlule. Iphinde engaveza njengoba ukuhlaselwa ukwethuka.
Esilawulayo-convulsive syndrome - khona izenzo abayimilutha. Zingase ezihambisana ngesiqondiso unomphela ukuze kokulandela noma ukuphepha. Ngesikhathi le mikhuba kungase kuthathe amahora angu-eziningana ngosuku nesikhathi ukudliwa. Ngokuvamile elalenziwa kungaba smenivatsya abanye.
Esilawulayo-phobic syndrome kuhambisana convulsive, okungukuthi, zikhona obsessions (imicabango) nezenzo.
ACS kuye isikhathi ukuthuthukiswa kungaba:
Izizathu esilawulayo syndrome
Ochwepheshe asinikeza impendulo ecacile ukuze lesi sifo esilawulayo ingavela nganoma yisiphi isizathu. Kuleli qophelo kukhona kucatshangwa ukuthi ezinye izici zokwakheka nezingokwengqondo nomthelela ekuthuthukiseni ACS.
imiphumela kuhlasimulise nokulimala engqondweni;
yezinkinga ebuchosheni ngemva izifo ezithathelwanayo;
pathologies isimiso sezinzwa;
nokuncipha ezingeni le-serotonin, norepinephrine futhi Dopamine ebuchosheni.
ubudlelwano emndenini ezicindezelayo;
esiqinile ngemibono imfundo (isib yenkolo);
sisezimweni sina ukucindezeleka;
ukuzwa eqinile (isib, ukuphendula acute izindaba ezimbi).
Ubani kuthintwa ACS?
A engozini enkulu ka esilawulayo sifo ngo abantu umndeni asebethole ihlangabezane Ezimweni ezinjalo - yofuzo. Okusho ukuthi, uma umndeni has umuntu kwathiwa unesifo ACS, kungenzeka ukuthi inzalo yakhe ngokushesha uyoba neurosis esifanayo, ezisukela ezintathu amaphesenti eziyisikhombisa.
ACS futhi kuncike uhlobo elandelayo ubuntu:
abantu nokungabathembi kakhulu;
abafisa ukugcina konke ngaphansi kokulawula kwabo;
abantu ngenhloso umlando ebuntwaneni ukuhlukumezeka, noma ezahlukene ezimeni izingxabano sina lowo umndeni wakubo;
abantu kakhulu anakekela ingane noma, Ngakolunye uhlangothi, musa unakwe ngokwanele kubazali babo;
zabhekana ahlukahlukene okulimala ebuchosheni.
Ngokwezibalo, akukho ukuhlukana inani leziguli disorder esilawulayo-kuphoqeleke phakathi kwamadoda nabesifazane. Kodwa kukhona ukuthambekela ukuthi neurosis ngokuvamile iqala ukubonisa abantu abaneminyaka engu-15 kuya ku-25.
Phakathi izimpawu eyinhloko ukubukeka disorder esilawulayo-abayimilutha, inani Ukuvela imicabango ekukhathazayo futhi imisebenzi okuyisidina nsuku zonke (isib, ukwesaba njalo iphutha ukusho igama noma ukwesaba amagciwane, okubangela njalo ukugeza izandla). Futhi singase sibonakale ephelezelwa izimpawu:
zinenhliziyo emnyama noma ukulahlekelwa ephelele yalo;
ihlukane ngokwengxenye noma ngokuphelele kubantu (inyumbazane).
Izigaba zabantu nezifiso izinhlobo
Ezimweni eziningi, abantu bavezwa mikhakha elandelayo ngokuvumelana izinhlobo nezifiso (izenzo kuphoqeleke bephoqelekile):
Neat noma labo besaba ukusilaphazeka. Okungukuthi, iziguli ukwethula isifiso njalo ukugeza izandla zakho, ukuxubha amazinyo akho, ukushintsha noma bahlanze izingubo zabo, njalo njalo. Labo njalo kuthiwa reinsured. Abantu abanjalo sakhathazeka kakhulu lapho sicabanga ukuthi kungenzeka umlilo, ukuvakasha yesela nokunye okunjalo, ngakho ngokuvamile kufanele uhlole ukuthi umnyango noma ifasitela, kungakhathaliseki embizeni, kuhhavini sivaliwe avaliwe, isitofu, yensimbi nokunye.
Yizoni abakungabazayo. Lezi abantu besaba bajeziswa amabutho ephakeme noma abomthetho, ngisho iqiniso lokuthi into kwenziwa yini njengabantu abaphelele njengoba becabanga.
Cishe abantu abangafuni phutha. Basuke elihlanyiswa oda kanye yesimethri konke: izingubo, izinto zabanye, ngisho ukudla.
Abaqoqi. Abantu abangakwazi ukuyeka izinto, ngisho noma akuzona kudingekile, ngenxa yokwesaba okuzokwenzeka kuyinto embi noma zihlala kuze kube zonke okufanayo uma udinga noma yini.
Izibonelo zokubonisa sibi syndrome senhliziyo e abadala
Kangakanani uphethwe "syndrome esilawulayo-abayimilutha"? Izimpawu zesifo kwamanzi kungenzeka ngesikhathi umuntu ngamunye ngendlela yabo.
I obsessions ezivamile:
Ngacabanga kuhlaselwa umndeni wakhe;
abashayeli: ukukhathalela wadubula phansi ingakenzeki;
ukukhathazeka kungabangela umonakalo ngephutha umuntu (isibonelo, ungahleli endlini yomunye ivuliwe umlilo, izikhukhula, njalo njalo);
ukwesaba abe abanukubeza;
ukwesaba ukuba zobungqingili;
umqondo wokuthi kukhona umlingani lothando, ukungabaza uyaphikelela ngokunemba amkhethile;
Ukwesaba ngephutha ngithi noma ukubhala ukuthi kukhona okungahambi kahle (isibonelo, ukusebenzisa ulimi olungafanele engxoxweni nomnikazi wenkampani);
ningesabi ukuphila ngokuhambisana inkolo noma zokuziphatha;
imicabango ekukhathazayo ngemvelaphi izinkinga bokuphila (ezifana ukuphefumula, ukugwinya, anyakaza emehlweni, njalo njalo);
ukwesaba ukuthi amaphutha emsebenzini noma umsebenzi;
ukwesaba ukulahlekelwa nenhlalakahle ngezinto ezibonakalayo;
Ukwesaba ukugula, itheleleke nge amagciwane;
imicabango njalo bajabule kakhudlwana noma ngokuletha amabhadi izinto, amagama, izinombolo;
Ezinye obsessions ezivamile zihlanganisa izenzo ezinjalo:
yokuhlanza njalo kanye nenhlonipho ngendlela ethile izinto;
njalo egeza isandla;
ukuhlola kokuphepha (ukuthi sivala zivaliwe off uma ugesi, igesi, amanzi nokunye);
ukuphindaphinda kaningi isethi efanayo izinombolo, amagama noma izisho ukuze ugweme izenzakalo ezimbi;
njalo cross-kokuhlola imiphumela emihle yomsebenzi wabo;
izinyathelo ukubala njalo.
Izibonelo zokubonisa sibi syndrome senhliziyo ezinganeni
Izingane esilawulayo-kuphoqeleke syndrome incane kakhulu kunabantu abadala. Kodwa izimpawu ezifanayo, kodwa engu-kushintshwe:
ningesabanga uzithola endaweni yokukhosela;
nokwesaba falling ngemuva abazali futhi walahlekelwa;
nokukhathazeka kokuhlaziywa, okuyinto lukhula ku kukhathazeka;
njalo ukugeza izandla ukuxubha amazinyo;
izakhiwo phambi kontanga lakhula laba syndrome esilawulayo nokunye.
Isitatimende ACS uphethwe
Ukuxilongwa esilawulayo-kuphoqeleke syndrome ukuhlonza imicabango awayiphazamisi kakhulu nezenzo eziye zenzeka phezu isikhathi eside (okungenani amaviki amabili) futhi kuhambisane ukucindezeleka noma ukucindezeleka.
Phakathi izici izimpawu obsessional ngoba uphethwe kufanele sifake hlangana okulandelako:
isiguli okwamanje okungenani eyodwa yokucabanga noma yesenzo, futhi uphikisa kubo;
umbono ukwenza ngesisusa, isiguli Akawukhululi iyiphi injabulo;
ukuphindaphinda kukhathazeka kuletha ukukhathazeka.
Ukuba yinkimbinkimbi kwayo uphethwe itholakala lokuthi ngokuvamile kuba nzima ukuhlukanisa syndrome esilawulayo-bacindezeleke kusukela ACS elula njengoba izimpawu zabo zenzeke cishe kanyekanye. Lapho kunzima ukunquma ukuthi yiziphi wabo uvele ngaphambi ke kubhekwa disorder eyinhloko ukucindezeleka.
Iningi kuzoveza sitholakele "esilawulayo-kuphoqeleke syndrome" ukuhlolwa. Njengomthetho, iqukethe eziningi nezindaba ezihlobene uhlobo kanye nesikhathi isinyathelo futhi ukucabanga, isici kweziguli ACS. Ngokwesibonelo:
inani isikhathi esichithwa nsuku ecabanga imicabango esilawulayo (izimpendulo kungenzeka: neze, amahora ambalwa amahora angaphezu kuka-6, njalo njalo);
inani lesikhathi nsuku esichithwa ukwenza izenzo kuphoqeleke (izimpendulo ezifanayo njengoba yombuzo wokuqala);
amadlingozi imicabango noma izenzo kuphoqeleke (izimpendulo kungenzeka: cha, ezinzima, alungise, nokunye okunjalo);
Ingabe ukhathazeka imicabango / izenzo control (izimpendulo kungenzeka: yebo, cha, kancane, njalo njalo);
Ingabe nawe uzizwa nezinkinga nge izandla / yithela / ukuxubha / sigqoka / ahlanze izingubo / izinto ukuze / khipha udoti, nokunye (izimpendulo kungenzeka: yebo, njengawo wonke umuntu, cha, awufuni ukwenza lokhu, wokudonsa njalo kanye nokunye okufana nalokho);
singakanani isikhathi osichitha ku Centauri elineshawa / ukuxubha / izinwele / sigqoka / yokuhlanza / udoti ukususwa, nokunye (izimpendulo kungenzeka: konke, kabili, kaningana, nokunye okunjalo).
Ukuze uthole ukuxilongwa esinembile futhi ukucacisa ngobucayi disorder, lolu hlu imibuzo kungaba kakhulu ngaphezulu.
Imiphumela incike inani lamaphuzu. Kaningi kuna yabo emikhulu, ayanda amathuba kokuba esilawulayo-kuphoqeleke syndrome.
Esilawulayo-kuphoqeleke syndrome - Ukwelashwa
Ukuze uthole usizo ekwelapheni sibi syndrome senhliziyo kumele wabhekisela Udokotela wezifo zengqondo owelapha kuyokusiza e ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe, kodwa futhi bakwazi ukukhomba uhlobo evelele wesiyaluyalu esilawulayo-abayimilutha.
Futhi indlela ungakwazi ukunqoba kule jikelele syndrome esilawulayo? ukwelashwa ACS ukuba sifeze eziningi ezingokwengqondo ezelaphayo. Imithi kuthiwa limane lifakwe ngemuva, futhi ngokuvamile bayakwazi silondoloze yi izuzwe udokotela kuphela.
Ngokuvamile esetshenziswa tricyclic kanye nemithi yokunciphisa ukucindezeleka tetracyclic (isb, "Melipraminum" "mianserin" kanye nabanye), kanye anticonvulsants.
Uma kukhona iziyaluyalu umzimba, okuyizinto ezidingekayo ukuze ukusebenza evamile izinzwa ubuchopho, udokotela ekunika amalungiselelo akhethekile ukuze ekwelapheni neurosis. Ngokwesibonelo, "Fluvoxamine", "Paroxetine" nokunye.
Njengoba ukwelashwa kokulutheka futhi psychoanalysis engahileli. Ekwelapheni disorder esilawulayo-kuphoqeleke wasebenzisa izindlela engqondweni yethu-kokuziphatha ukuthi kukhona ngempumelelo ngaphezulu.
Inhloso yalesi ukwelashwa - ukusiza isiguli ukuyeka ukugxila imicabango esilawulayo nemibono, kancane kancane aminzisa kubo. Umgomo we operation simiswe ngalendlela lelandzelako: isiguli kumele bagxile hhayi isaziso, nokwenqaba ukwenza isiko. Ngakho, isiguli ihlangabezana ukungakhululeki kusukela kukhathazeka akuyona, futhi umphumela sokungasebenzi. Ubuchopho sekuqalile kusukela inkinga eyodwa kuya kwenye, ngemva izindlela eziningana ezinjalo, ugqozi ukwenza izenzo kuphoqeleke luyaphela.
Phakathi kwezinye izindlela zokwelapha ezivamile owaziwa kodwa engqondweni yethu-ekuziphatheni, ekusebenzeni futhi namanje indlela "stop ukucabanga." Isiguli ngesikhathi imidlinzo izenzo Kunconywa ukuthi ngengqondo kuwe, "Misa imoto!" Futhi uhlaziye konke ngokuzama ukuphendula imibuzo elandelayo:
Kanjani amathuba eqinile ukuthi lokhu kuzokwenzeka empeleni?
Ingabe Ukuvimbela imicabango esilawulayo ngokuvamile uphile futhi kungakanani?
umuzwa kangakanani omkhulu kabi kwi-inthanethi?
Ingabe ukuphila okulula kakhulu ngaphandle obsessions kanye nezifiso?
Ingabe lokhu, uyojabula ngokwengeziwe. ngaphandle obsessions amasiko?
Uhlu singabuza kuze kushone. Into esemqoka ukuthi injongo yabo kwaba ukuhlaziya isimo bevela kuzo zonke izinhlangothi.
Kukhona kungenzeka ukuthi wezifo enquma sebenzisa indlela ehlukile yokwelashwa esikhundleni noma njengenhlangano usizo olwengeziwe. It incike esimweni ngabanye namandla aso. Ngokwesibonelo, kungase kube umndeni nobe licembu umsebenti ukwelashwa kwengqondo.
Ukuzisiza wena e ACS
Ngisho noma une owelapha ubhedu emhlabeni, imizamo kumele kwenziwe futhi iningi. Hhayi bambalwa kakhulu odokotela - omunye wabo, Dzheffri Shvarts, umcwaningi owaziwa kakhulu ACS - uqaphele ukuthi umsebenzi ezimele ngesimo sempilo yakhe kubaluleke kakhulu.
Ngenxa yalesi udinga:
Ukuze uhlole yonke imithombo kungenzeka wesiyaluyalu esilawulayo-kuphoqeleke: izincwadi, ezemithi, izihloko ku-intanethi. Dweba Imininingwane ngangokunokwenzeka mayelana neurosis.
Sebenzisa amakhono ukuthi ufundise Umeluleki wakho. Okungukuthi umzamo ukucindezela obsessions nokuziphatha abayimilutha.
Hlala uxhumene nabathandekayo - umndeni nabangane. Gwema ukuzehlukanisa nabantu, njengoba nje kuchubekisela embili syndrome esilawulayo.
Futhi okubaluleke nakakhulu, ukufunda ukuze uphumule. Funda okungenani izisekelo zokuzilibazisa. Sebenzisa ukuzindla, yoga noma ezinye izindlela. Bazokusiza ukunciphisa umthelela izimpawu wesiyaluyalu esilawulayo-kuphoqeleke, futhi imvamisa nesenzakalo yabo.
Ukutheleleka esicashile ezingabantu
Ane-alikhali Ukwandiswa phosphatase: kusho ukuthini?
Indlela esiphatha ngayo umphimbo obuhlungu ngendlela ingane?
Heel Dry: izimbangela kanye zokwelapha ngempumelelo
Staraya Russa (resort). Phumula futhi ukwelashwa Staraya Russa
Indlela ubhalisele sokukhulelwa?
Wathungela isigqoko ukukhilosha for girls
EBulgaria, Inxanxathela Joya Ipaki 4 *: izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Penda izinwele onsomi: ukubuyekeza, shades, abakhiqizi kanye nokubuyekeza